Nhau - Anker ichangoburwa USB-C dock inounza katatu-screen rutsigiro kuM1 Mac
Nepo Apple yekutanga M1-based Macs yaingokwanisa kutsigira zviri pamutemo chiratidziro chekunze chimwe chete, pane nzira dzekutenderedza ichi chinogumira.Anker nhasi akafumura nyowani 10-in-1 USB-C dock inopa izvo chaizvo.
Iyo Anker 563 USB-C Dock inosanganisira maviri HDMI madoko uye DisplayPort chiteshi, iyo inoshandisa DisplayLink kufambisa masaini evhidhiyo akawanda pamusoro pekubatana kumwe chete. Tichifunga kuti hubhu iyi inoshanda pamusoro petambo imwe chete ye-USB-C, pane bandwidth mipimo inodzikamisa kunaka. ye monitors iwe yaunogona kubatanidza.
Mune dzimwe nhau dzeAnker, akati wandei ekambani ichangobva kuziviswa zvigadzirwa zvave kuwanikwa, zvinosanganisira hombe 757 inotakurika magetsi chiteshi ($ 1,399 kuAnker neAmazon) uye Nebula Cosmos Laser 4K purojekita ($2,199 kuNebula neAmazon).
Kwidziridzo Chivabvu 20: Chinyorwa ichi chakagadziridzwa kuratidza kuti doko rinoshandisa DisplayLink pachinzvimbo cheMulti-Stream Transport kutsigira akawanda mamonitor.
MacRumors ishamwari yakabatana yeAnker neAmazon.Paunodzvanya pane chinongedzo uye wotenga, tinogona kugamuchira mubhadharo mudiki unotibatsira kuti saiti irambe ichishanda.
Apple yakaburitsa iOS 15.5 uye iPadOS 15.5 muna Chivabvu 16, ichiunza kuvandudzwa kwePodcasts neApple Cash, kugona kuona chiratidzo cheWi-Fi cheHomePods, akawanda ekuchengetedza gadziriso, nezvimwe.
Apple yepagore yekuvandudza musangano, kwatichaona preview yeIOS 16, macOS 13, uye zvimwe zvinogadziridza, pamwe nezvimwe zvinobvira hardware nyowani.
Apple iri kushanda payakagadziridzwa vhezheni yeiyo hombe-screen iMac inogona kudzosa zita re "iMac Pro".
Next-gen MacBook Air update inouya muna 2022 ichaona Apple ichiunza yakakura dhizaini yekuvandudza kuMacBook Air kubvira 2010.
MacRumors inokwezva huwandu hwakawanda hwevatengi uye nyanzvi dzinofarira tekinoroji yazvino uye zvigadzirwa.Isu zvakare tine nharaunda inoshanda yakatarisana nekutenga sarudzo uye tekinoroji maficha eiyo iPhone, iPod, iPad uye Mac mapuratifomu.